श्रीदेवी देखि हेमा मालिनीसम्म यी ९ बलिउड अभिनेत्रीले गरेका थिए अरुले छाडेकासँग विवाह ! – " सुलभ खबर "
श्रीदेवी देखि हेमा मालिनीसम्म यी ९ बलिउड अभिनेत्रीले गरेका थिए अरुले छाडेकासँग विवाह !
बलिउड जगतमा अभिनेत्रीहरु चलचित्र बाहेक उनीहरुको विवाहका कारण पनि चर्चामा हुने गर्दछन्। बलिउडमा यस्ता अभिनेत्री पनि छन्, जसले सम्बन्ध विच्छेद पछि पुर्नविवाह गरे। यस्तै केही अभिनेत्रीहरुले भने पहिलेनै विवाहित तथा सम्बन्ध विच्छेद भएको व्यक्तिसँग विवाह गरे। आज हामी बलिउडका ती अभिनेत्रीहरूबारे चर्चा गर्नेछौ, जसले विवाहित व्यक्तिसँग विवाह गरे।
‘बलिउडकी चाँदनी’ श्रीदेवीले चलचित्र निर्माता बोनी कपूरसँग विवाह गरिन्। यसभन्दा अघि बोनीको १९८३ मा विवाह भइसकेको थियो। बोनीको यो दोस्रो विवाह थियो। बोनी कपूरका पहिलो श्रीमतीबाट अर्जुन र अंशुला दुई सन्तान छन् भने श्रीदेवीबाट दुई छोरी छन्।
बलिउडकी ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनीले नायक धर्मेन्द्रसंग विवाह गरेकी थिईन्, जो पहिले नै विवाहित थिए। धर्मेन्द्रकी पहिलो पत्नीको नाम ‘प्रकाश कौर’ हो। हेमा र धर्मेन्द्र दुबैले विवाहको लागि धर्म परिवर्तन गरेका थिए। दुबैले इस्लाम धर्म स्वीकारे र चुपचाप विवाहको बन्धनमा बाधिएका थिए। तर पछि उनीहरु दुबैको हिन्दू रीतिथितिमा पनि विवाह भयो। यस प्रकार हेमा धर्मेन्द्रकी दोस्रो श्रीमती भइन्। विवाह पछि प्रकाश कौरले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिईन्, ‘हेमाले जे गरिन् त्यो ठिक गरिनन्, म हेमाको ठाउँमा भएको भए त्यसो गर्दिन थिए’।
बलिउडकी प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा कपूरले संजय कपूरसँग विवाह गरेकी थिइन्। संजयको पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। यद्यपि, करिश्मा र संजयको पनि पछि सम्बन्धविच्छेद भयो।
बलिउड अभिनेत्री रवीना टण्डनले पनि पहिलेनै विवाहित अनिल थडानीसँग विवाह गरेकी हुन्। अनिल थडानीकी पहिला पत्नीको नाम नताशा हो। रवीना र अनिलका रणबीरवर्धन र राशा दुई छोराछोरी छन्।
यो सूचीमा बलिउडकी पध्मश्रीद्वारा सम्मानित अभिनेत्री, विद्या बालनको नाम पनि समावेश गरिएको छ। विद्याले २०१२ मा सिद्धार्थ राय कपूरसँग विवाह गरेकी थिईन्। सिद्धार्थले विद्या बालन अघिनै २ विवाह गरिसकेका थिए।
बलिउडकी बेबो अर्थात् करीना कपूरले पनि आफ्नो जीवनसाथीका रुपमा एक विवाहित व्यक्तिनै चुनिन्। उनले बलिउडकै अभिनेता सैफ अली खानसंग विवाह गरिन्। सैफकी पहिलो पत्नीको नाम अमृता हो। सैफ र करीनाको एउटा छोरा पनि छ, जो आजकल निकै चर्चामा रहेको छ।
बलिउडकी फिट गर्ल शिल्पा शेट्टीले प्रख्यात उद्योगपति राज कुन्द्रासंग गरेकी थिइन्। राजले शिल्पाको लागि आफ्नो पहिलो पत्नी कवितासंग सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। राज र शिल्पाको एक छोरा पनि रहेको छ, जसको नाम विवान हो।
मिस युनिवर्स रहेकी अभिनेत्री लारा दत्ताले भारतीय टेनिस प्लेयर महेश भूपतिसंग विवाह गरेकी हुन्। महेशको पहिलो विवाह श्वेता जयशंकरसंग भएको थियो।
रानी मुखर्जीले यशराज फिल्मका मालिक आदित्य चोपड़ासंग विवाह गरेकी हुन्। आदित्य पहिलानै विवाहित थिए र यो उनको दोस्रो विवाह थियो। आदित्य र रानीको एक छोरी पनि छिन्, जसको नाम अदिरा हो।
मेचीनगरमा भेटियो हरियाे परेवा, नेपालमा पहिलाेपटक भेटिएकाे दाबी
काठमाडौँ — चरा खोजकर्ता देवेन्द्र खरेलले मेचीनगरमा ‘हरित परेवा’ प्रजातिको चरा फेला पारेका छन् ।
माया अन्धो हुन्छ भन्ने भनाई मलाइका र अर्जुनमा भएको छ लागू, यसरी गर्दैछन् हिमाचल प्रदेशमा रोमान्स
एजेन्सी । मलाइका अरोरा र अर्जुन कपुरको अफेयरको बारेमा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो
‘परानै दिन्छु’ को अपार सफलतापछि दयाहाङ र लक्ष्मीको ‘सुनन परानै दिन्छु’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवाको अभिनय रहेको गीत ‘सुनन परानै दिन्छु’
‘कृष्णलीला’को छायांकन सुरु
विराटनगर, १५ मंसिर । दीपक ओली निर्देशित फिल्म ‘कृष्णलीला’को हाल इलामका विभिन्न रमणीय स्थलमा छायांकन
साडी लगाउने बेला बिर्सेर यी पाँच गल्ती पनि नगर्नुहोस्
भारी गहना नलगाउनुहोस्ः साडी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने भारी गहना लगाउने गल्ती नगर्नुहोस् किनभने यस्तो गर्दा
‘मेरो एक्सको छम्मा’संग भन्दै परमिता र प्रियंका ट्रोलको सिकार
पोखरा/ नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो परमिता आरएल राणा । अभिनेत्री भएका कारण उनको
साथीकी आमालाई पनि न छोड्ने यी युवक
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दबाबमा विश्वराजलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस
७२ प्रतिशत जनतालाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउँछौँ : मन्त्री ढकाल
केपी ओलीले भोलि नै राजीनामा गर्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा